VaChiyangwa Vanonyorera VaMugabe Tsamba Pamusoro peZiscosteel
Gumiguru 18, 2010
Muzvinabhizimusi ane mukurumbira munyika, VaPhilip Chiyangwa, vanyorera mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, tsamba vachida kuti kana hurumende yotengesa kambani yeZisco itangewo yapa mukana kumakambani evatema vari munyika, kwete kutarisa vekunze chete.
Mutsamba yavo, VaChiyangwa vati vemakambani ekunze aya haana hany’a nevanhu, sezvo zvinangwa zvavo zviri zvekuita mari chete.
VaChiyangwa, avo vaimbove mutungamiri weAffirmative Action Group, vane zvikamu zvehupfumi mukambani yeZeco, iyo inogadzira zvakasiyana siyana zvinosanganisira matiroko ezvitima, matangi ekuchengetera zvinhu pamwe nematura emarata.
Vatiwo vekunze vari kuda kutenga Zisco ava, ndivo zvakare vanotungamira mberi pakuparadza upfumi hwenyika vachishandiswa nemhandu dzeZimbabwe.
VaChiyangwa vaudza Studio7 kuti vamwe vemakambani ekunze vari kushanda munyika vakapinda nevanhu vavo vanoita mabasa aifanirwa kunge achiitwa nevana veZimbabwe, akaita sekuvaka, pamwe nekuchera, zvinove zvavari kuti havafari nazvo.
Mashoko aVaChiyangwa anouya apo hurumende iri kutsvaga makambani anofanirwa kushanda nayo mukuvandudza Zisco. Makambani anoti ArcelorMittal yekuSouth Africa, Jindal Steel and Power yekuIndia, Bright Star yekuMauritius, neChina Sonango International yekuChina, ari pakati pemakambani ekunze ari kuda kutenga hupfumi muZiscosteel.
Hurukuro naVaPhilip Chiyangwa